ညီလင်းသစ်: လတစင်းရဲ့ ညခင်းအလင်္ကာ
Posted by ညီလင်းသစ် au 19.4.11
စတာနော်....ပထမပုံလေး လှပါတယ် ကြည်နေတာပဲ
အိပ်တော့မလို့ မအိပ်ခင်ဝင်ကြည့်လိုက်တာ ပို့စ်တက်နေတာတွေ့တာနဲ့ ဖတ်လိုက်တာ
Beautiful and lovely scene of full moon night.You tried your best although you don't satisfy the result.I like both cos they give different feeling:)
အကိုကလည်း ..ဘယ်ကအရည်အသွေးမကောင်းရမှာလဲ။ ဒီလောက်ကောင်းတာကို။ ကျွန်မ မျက်လုံးထဲမှာတော့ ဒုတိယပုံက လမင်းကြီးက ကိုယ့်ဆီရောက်လာတော့မယောင် ဖောင်းကြွလို့။ လပြည့်ရိပ်က လပြည့်ညတွေကို ခရေဇီဖြစ်တာနှော်။ ၁ ပုံလောက် လက်ဆောင်ပေးမလား။ :D
ကိုယ်တိုင်မရိုက်တတ်တော့ သူများတွေရိုက်တာကြည့်ပြီး လှနေတာပဲ..
ကျနော့ကို အသက် ၂၀ တုန်းကလို လှအေင်ရိုက်ပေးပါလားဟင်......
ကျနော်တို့ ရိုက်ရင် လက တစ်ခြမ်းပဲ ပါချင်ပါမှာ အခုက လှပါတယ်ဗျ ပြာလဲ့လဲ့နောက်ခံ နဲ့ ငွေရောင်လမင်းက တင့်တယ်နေတာပဲကိုး) ဓာတ်ပုံဆရာ တော်ပါတယ်ဗျ ။
ပို့စ်ကဒ် နဲ့ တူတယ်။
ပန်းချီ လို့လည်း ထင်ရတယ်။
မအ်ိမ်သူ ညွှန်တဲ့ လ။
ကိုယ်လည်း အိမ်ပြူတင်းပေါက်ကနေ ကြည့်လိုက်ရင် လပြည့်နေတာ မြင်ရတိုင်း လုပ်လက်စအလုပ်တွေ အသာချပြီး ထရိုင်ပေါ့တ်တွေ ဘာတွေနဲ့ ခဏခဏကို ရိုက်ဖြစ်တယ်... ဒါပေမယ့် တခါမှ ပုံကောင်းကောင်းမရ.. ကိုယ်ညံ့တာပါ။ ကိုယ့် ကင်မရာကလည်း full frame မဟုတ်လေတော့....
အခု ကိုညီလင်းရဲ့ပုံ တွေ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ အပေါ်က ပုံကို ပိုကြိုက်တယ်... လက ကောင်းကင်ပြာပြာနဲ့ သစ်ပင်လေးတွေနောက်ခံနဲ့မှ ပိုအသက်ဝင်တယ်... ကိုယ်ရိုက်တဲ့ လ ပုံကတော့ အမည်းရောင် အဝတ်ပေါ်မှာ အဖြူရောင် အဝိုင်းပြားကြီးတခု ချထားသလိုပါပဲ... စိတ်ဓါတ်ကျစရာ.. ဟိ...
ဘယ်နှယ့် သည်းခံပြီး ကြည့်သွားရမလဲ သည်းခံစရာမလိုဘဲ ကြည့်သွားတယ်
ကင်မရာတွေ ဓါတ်ပုံပညာတွေ ကိုယ်ကဘာမှသိတာမဟုတ်ဖူး မတ်ခ်တူး ဆို မော်တော်ကားလောက်ဘဲ သိတား)
အပေါ်တပုံကို ပိုကြိုက်တယ် .. အပြင်ထွက်လို့ ကောင်းကင်မော့ကြည့်မိတဲ့အခါ လပြည့်နေတာတွေ့ရင် ဘယ်လိုသဘောကျမှန်းမသိဘူး ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့မဟုတ်ဖူး အိမ်ပြန်ချင်လို့ ...
အိုး....ဘယ့်နှယ် ကောင်းလိုက်တဲ့ပုံကို...၊ အမ လရိုက်ရင် လလုံးကလွဲပြီး ဘာမှ မပေါ်ဘူး...။ ခုပုံက ရွှေလမှာ ယုန်ဝပ်လို့ ဆန်ဖွတ်တဲ့ အဖိုးအိုဆိုတာကိုတောင် သတိရသွားစေတယ်.....
ပြောဘူးတယ်နော်။ ဓါတ်ပုံကောင်းရင်ပန်းချီလို့ ထင်ရတယ်ဆုိုတာလေ။
အခုလည်း ညရဲ့လမင်း လို့ ကုိုယ့်ဘာသာနံမည်ပေးသွားတဲ့ ပန်းချီကားလေးကြည့်ပြီးကျေနပ်ပြန်သွားပါတယ်။း)
ပြောတော့မယ်..... ကင်မရာမန်း တော်လို့ပါ လ ကလှချင်မှ လှမှာ....:):)
ညီလင်းသစ်ရေ... ပုံတွေကောင်းပါတယ်... မအိမ်သူကလဝန်းလေးပေါ့ ဟုတ်လား... :)
အခုထိ ဓါတ်ပုံ ပညာကို လေ့လာနေဆဲပဲ၊
လကို အဲဒီလောက်ထိအောင် ဇွန်မ်းဆွဲပြီး ရိုက်နိုင်တယ်နော်၊ အနီးကပ်ပဲ။
အပေါ်တပုံလိုမျိုး စလုံးမှာလည်း မြင်ဖူးလိုက်တယ်၊ လပေါ်က အရိပ်တွေတော့ မမြင်ရဘူး၊ လ၀န်းဖြူဖြူနဲ့ ကောင်းကင် နက်ပြာပြာ။
သိပ်လှတယ် အပေါ်ကပုံဆို ပန်းချီကားလေးလိုပဲ
အပေါ်ကပုံလေးသိပ်လှတယ်အစ်ကို...ကြည့်ရင်းနဲ့ လရောင်အောက်ကအေးချမ်းတဲ့ညတွေကိုသတိရသွားတယ်..။ သိပ်လှတယ်.။
I like the first picturealot...It is really beautiful...:)
ဒါဆိုရင် လအရိပ်မှာ ညအိပ်ရာဝင်စဉ်တော့ ဖြစ်ကုန်ပြီး)
အားပေးစကားတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ ဒါတွေဟာ တခါတခါမှာ တကယ်လိုအပ်တယ်.. အဟဲ၊
လပြည့်အရိပ်မှာ ခဏတာဖြစ်ဖြစ် ချွေးသိပ်ပေးချင်တဲ့ သူက ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ယူသာသွားပါဗျာ...၊း)
ဒုတိယ ပုံက ဖောင်းကြွဆို မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာတွေကို အားကျလို့....၊း)
ဘယ်ပန်းချီရေးလို့ရယ် မမှီဆိုတဲ့ သီချင်းသာ ဟစ်လိုက် ချင်တော့တာပါပဲဗျာ....၊း)
လဆန်းမှာ ဆိုရင်တော့ လ,က တခြမ်းပဲ ဖြစ်မှာ သေချာတယ်ဗျို့၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညီငယ်တစ်ယောက်ဆီက အားပေးသံက ကိုယ့်အတွက် တော့ ကျယ်လောင်မြည်ဟီးလို့...၊ ကျေးဇူး...၊း)
ကွန်မန့်လေးက ကျစ်လစ်ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းတယ်း)
ကိုယ့်လိုပဲ ဝါသနာတူတဲ့ သူတစ်ယောက်က ဒီလို အားပေးသွားတော့ ဘရင်းန် ကြက်ပေါင်းရည်ကို သနားတယ်လို့ ပြောလို့ ရသွားပြီ...၊း)
ကျနော့်ရဲ့ မတ်ခ်တူးကတော့ စီးလို့မရဘူးဗျ၊ ကျနော် လည်း အိပ်မပြန်နိုင်လို့ ဓါတ်ပုံချည်းပဲ ဖိရိုက်နေရတာပါ ဗျာ..၊း(
အင်း.. ကျင်းတွေ ချိုင့်တွေ မြင်ရတာတော့ အမှန်ပဲဗျို့း)
အားပေးစကားလေးက တကယ်ပဲ ချစ်စရာမို့ ကျေးဇူး တင်ရပါသဗျာ...၊
ကင်မရာမင်းန်က မတော်တာ သေချာတယ်ဗျ၊ ကြည့်ပါလား ရိုက်ထားတာ လ,ရဲ့ ဝက်ခြံတွေ တင်းတိတ်တွေ အတိုင်းသားပေါ်လို့၊ မော်ဒယ်လ်သာဆို ကိုယ့်ကို သတ်သွားမှာ သေချာတယ်..၊း)
ညစာက ညတိုင်း စားနေရတာ၊ လပြည့်ညက တလမှ တခါဆိုတော့လည်း.....၊း)
အဲဒါဆို သူက အဝေးက လဝန်းပဲ ဖြစ်ချင်မှာ သေချာတယ်၊ နီးရင် ကျင်းတွေ၊ ချိုင့်တွေနဲ့မို့...၊းD
ဓါတ်ပုံကတော့ မုဆိုးစိုင်သင် ပါပဲဗျာ၊ အခုလည်း အနီးကပ် မြင်ရအောင် ပုံကြီးချဲ့ထားလို့သာ....၊
ပန်းချီဆရာမ ကိုယ်တိုင်က ပန်းချီကားနဲ့ တူတယ် ဆိုတော့ ကျနော်ဖြင့် “ငါကွ” လို့ လက်ခမောင်း ထခတ် ချင်ချင်ရယ်....။းD
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီရေ....၊ တကယ့်ကိုပါပဲ..၊
အမြဲလာလည်တာ သိရလို့ ဝမ်းသာရသလို ချန်ခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်၊ နောက်လည်း အဆင်ပြေရင် ဝင်ပါထွက်ပါဗျာ...။
ကိုညီလင်းပြောမှ ဟိဟိ ဟုတ်သားလို့... ကျမက တခါမှ လကိုကြည့်ဖို့သတိမရတတ်သူပါ...။ သူကမှ တခါတလေ သတိတရပြောသေးတယ်.. လပြည့်ရောက်ပြီတို့ဘာတို့.. အဲဒါမနေ့ကရိုက်တာလား..ဒါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်ပဲရှိသေးတယ်..ဒါကြောင့်ဝိုင်းနေတုန်းပဲနော်.. ၁၈ရက်ကလပြည့်.. ခုမှပြက္ခဒိန်ကြည့်မိတာ..
ခုလည်းထပ်ပြောလိုက်ဦးမယ် Good night ပါလို့ :P
သြော်.. မစူးနွယ်က သတိမထားမိလိုက်ဘူး ထင်တယ်၊း) ကျနော်လည်း အများအားဖြင့်တော့ မေ့တတ်ပါတယ် ဗျာ၊ ဒီပုံတွေကတော့ ၁၇ ရက်နေ့က ရိုက်ခဲ့တာ၊ လ မပြည့်မီ ၁ ရက်အလိုပေါ့..၊ အိပ်မက်လှလှ မက်ပါစေဗျာ။း)
I also tried to take the moon last two days but I felt Singapore's moon has something missing. Once I saw your first image,i missed our countrysides so much. :(
အဲဒီစာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောတာနော်။
comments တွေ ဖတ်ရတာ ကိုယ်ပြောဖို့တောင် မကျန်တော့ဘူး။ ပျော်စရာကြီးး
အလှကို ခံစားတတ်တဲ့ အိမ်သူ နဲ့ မှတ်တမ်းတင်တတ်တဲ့ အိမ်သား နဲ့မို့ ဒီပုံလေးတွေက ပို ပြည့်စုံသွားတယ် ထင်မိပါတယ်။
တို့သာ ရိုက်မယ်ဆို လ ဘရိတ်ဒန့်ဆွဲနေသလို အတွန့်တွန့် အထပ်ထပ် ဖြစ်နေမှာ.. (ဒါ တော်ရုံ ပါရမီ မဟုတ်ဘူးလို့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် အားပေးနေရတာ..)